Yintoni i-SEPE: yeyiphi imisebenzi eyenzayo kunye nendlela yokunxibelelana nathi | Ezezimali
Ngokuqinisekileyo uvile nge-SEPE ngaphezulu kwesihlandlo esinye, kodwa ungasixelela ukuba ii-akhronimi zihambelana njani? Ngaba uyazi ukuba yintoni umsebenzi wale nkonzo kunye nokuba ungakunceda ngantoni.
Ukuba uhambile ungenanto kuba awukwazi ukumisela yintoni iSEPE, ithini imisebenzi yayo okanye ubudlelwane kunye nokubaluleka ekukunike yona, emva koko le nto siyichazileyo iya kukunceda wazi yonke into malunga neli nani.
1 Yintoni iSEPE
1.1 Ngubani "umntu ekujoliswe kuye" weSEPE
2 Imisebenzi yeSEPE
2.1 Ukuphuhliswa kwemigaqo-nkqubo yengqesho
2.2 Ukulungelelaniswa neearhente zabasebenzi
2.3 Ukulungelelaniswa kweeOfisi zeNgqesho zoLuntu oluZimeleyo
2.4 Uhlaziyo lwedatha
3 Ubudlelwane noKhuseleko lweNtlalo
4 Ungaqhagamshelana njani neSEPE
I-SEPE zezi Isifinyezo seNkonzo kaRhulumente yeNgqesho kaRhulumente, Ngamanye amagama, ngumzimba onxulumene noMphathiswa Wezabasebenzi ojongene nokulungelelanisa imigaqo-nkqubo yengqesho kulo lonke elaseSpain.
Inekomkhulu likarhulumente kunye neeofisi ezingama-52 ezisasazwe kwilizwe lethu lonke ukwazisa, ukulawula nokulawula yonke into enento yokwenza nomsebenzi. Ukongeza, ineeofisi ezininzi zobuso ezihanjiswa kumaphondo angama-50 eSpain naseCeuta naseMelilla.
Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba uqhubeke ukubiza le INEM, kwaye ubungaphazami. Nangona kunjalo, uMthetho weNgqesho owaqulunqwa ngo-2003 (kwaye waguqulwa ngo-2015), wabangela ukuba i-National Employment Institute (INEM) yatshintshe igama layo kwiNkonzo yoLuntu kaRhulumente, eyaziwa ngokuba yi-SEPE.
Ngubani "umntu ekujoliswe kuye" weSEPE
I-SEPE yinkonzo ekufuneka yenziwe luluntu. Ingxaki kukuba ixesha elininzi sicinga ukuba lo mzimba ukhathalela kuphela abantu abafuna umsebenzi, kodwa akukho nto iyenye. Kwaye akunjalo.
Ngokwenene "abaphulaphuli ekujoliswe kubo" banzi kakhulu. Ngokukodwa:
Abangaphangeliyo okanye abasebenzi bexesha elide abangasebenziyo abafuna ithuba lomsebenzi.
Ulutsha oluza kungena kwimarike yezabasebenzi.
Abasebenzi abasebenzayo, nokuba baphendule imibuzo, banike uqeqesho, balawule iingxaki zomsebenzi ...
Oosomashishini. Ukuba unoluvo, ungaya kwi-SEPE apho baya kuthi bakwazise ngokhuphiswano, izibonelelo okanye iindlela zokunxibelelana nabanye abanokwenza ukuba umbono wezorhwebo uzaliseke.
Iinkampani. Kuba nge-SEPE ungacinga ngokuqesha abasebenzi kwishishini lakho.
Ngoku ukuba uyazi ngcono ukuba yintoni i-SEPE, kunye nabantu abanokukunceda, lixesha lokuba ufumanise ukuba yeyiphi na imisebenzi enayo, ngokubanzi ngakumbi ngakumbi.
Ngokubanzi, injongo ye-SEPE kukuba «Yiba negalelo kuphuhliso lomgaqo-nkqubo wezengqesho, ulawule inkqubo yokhuseleko yentswela-ngqesho kwaye uqinisekise ulwazi ngemakethi yezabasebenzi ukuze ufezekise, ngentsebenziswano ye-Autonomous Public Employment Services kunye nezinye iiarhente kwicandelo lezabasebenzi, ukufakwa kunye nokusisigxina intengiso yabasebenzi kunye nokuphuculwa koluntu lweenkampani ”. Ngamanye amagama, ijongana ne- ukugubungela nokwanelisa iimfuno zabasebenzi baseSpain.
Ukwenza oku, unezixhobo ezininzi. Zezi:
Ukuphuhliswa kwemigaqo-nkqubo yengqesho
I-SEPE liqumrhu elinobuchule engqondweni lokuhlalutya imakethi yezabasebenzi ukubonisa imigaqo-nkqubo yengqesho, okanye into efanayo, ukuphuhlisa uhlobo lwenyathelo elixhamlisa ingqesho elizweni.
Ukulungelelaniswa neearhente zabasebenzi
Ngummeli wemisebenzi kufuneka uqonde ukuba babhekisa kwiinkampani, oosomashishini abazimeleyo, abasebenzi kunye neemanyano zabasebenzi. Zonke zinxulumene nobomi bokusebenza kwaye, ke, kufuneka zilungelelaniswe ukuze kungabikho ukungalingani, okanye unyango olukhethekileyo kumaqela athile.
Ukulungelelaniswa kweeOfisi zeNgqesho zoLuntu oluZimeleyo
Elinye icandelo lokulungelelanisa (ngakumbi ukuze kubekho imigaqo kwaye isebenza kuwo wonke umntu ngokulinganayo), ikwiiofisi ezinazo kwiindawo ezahlukeneyo ezizimeleyo, kubandakanya iCeuta neMelilla.
Zithini iinkcukacha zolwazi? Kulungile ibhekisa kwingxelo egciniweyo yabo bonke abasebenzi Ababhaliswe kweli lizwe, kunye nemisebenzi, iinkampani, ... iSEPE inokufikelela kwezi datha, kunye nakwiziko ledatha lazo.
Umzekelo, ezi-ofisini banedathabheyisi yabasebenzi besixeko, ukuze kuthi, ukuba kukho umsebenzi, kunokuthi kukhethwe abagqatswa ukuba babathumele kwinkampani kwaye benze udliwanondlebe ukuze babone ukuba bayawufumana na umsebenzi.
Ubudlelwane noKhuseleko lweNtlalo
Mhlawumbi lo msebenzi ngowona waziwa kakhulu, kwaye ngowona usondelelene kakhulu neSEPE. Njengoko besesitshilo, ngoyena ulawula unikezelo lwabasebenzi kunye nemfuno eSpain, kodwa inxulumene ngokusondeleyo noKhuseleko lweNtlalo. Ngoba?
Inika iikhosi zoqeqesho. Iikhosi zoqeqesho zisebenza ukuze umsebenzi afaneleke ngakumbi kwaye angakhetha amathuba emisebenzi angcono. Ke ngoko, fikelela kwizibonelelo ezininzi.
Ukulawula intswela ngqesho. Xa umsebenzi engasebenzi, i-SEPE ngumzimba ophetheyo wokuqonda isibonelelo sokungaphangeli, ukuwulawula nokuwulawula. Nokuba emva koku, unokuseka ezinye iintlobo zoncedo kubantu abangasebenziyo ngelixa befumana umsebenzi omtsha.
Ungaqhagamshelana njani neSEPE
Ukuba emva kokufunda yonke le nto ucinga ukuba i-SEPE inokukunceda ngokunxulumene nemarike yomsebenzi, nokuba ufuna umsebenzi, kuba ufuna abasebenzi, okanye kuba kukho idatha enxulumene nomsebenzi ongacacanga kuwe, yazi indlela yokunxibelelana nabo kubaluleke kakhulu.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba indlela yokunxibelelana neSEPE yahluke kakhulu. Kuyaziwa oko ineeofisi ezingaphezulu kwama-700 ezisasazwe kumaphondo angama-52 eSpain Kwaye, ke, ungaya ngobuqu kuzo naziphi na iiofisi zabo uyokufuna isikhokelo, uphendule imibuzo, uphawule ngezibonelelo, njl. Ngamanye amaxesha, kuye kufuneke ukuba, kwimicimbi eyahlukeneyo, kucelwe ukuqeshwa kwangaphambili ukuthintela izihlwele okanye ukuba bangabinakho ukuza kuwe ngokukhawuleza njengoko kufuneka.
Nangona kunjalo, ifom yobuso ngobuso ayisiyiyo kuphela. Banazo neenkonzo zoncedo ngomnxeba ezenziweyo. Ngokukodwa:
Umnxeba ukunceda ummi, 900 81 24 00. Ukongeza, kwi-ofisi nganye banenombolo yomnxeba yenkonzo yabemi (enye into kukuba bayayithatha kuwe).
Ifowuni yokusebenzela iinkampani, 901 01 09 90, apho amathandabuzo aphendulwa kwaye nedatha inokuthunyelwa.
Okokugqibela, unokufikelela kwi-SEPE ngokusebenzisa iwebhusayithi yayo, apho ungangena khona iinkonzo zengqesho, izibonelelo, ulwazi ngengqesho, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Yintoni iSEPE
Ndifuna ntoni ilungelo elilodwa lomenzi wechiza ngombono
Ikhefu lokunakekela abantwana